Fetibe niaraka tamin’ny Hosona Lion/Orange | GAZETY_ADALADALA
Fetibe niaraka tamin’ny Hosona Lion/Orange
Posted on 08/11/2009 by gazetyavylavitra
Hosona = câble
Dia nifety tokoa moa ny olona omaly 07 novambra teny amin’ny Kianjan’Alarobia.
Rehefa niala tany Toamasina tamin’ny Alakamisy 05 novambra tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany ny sarin’afo (satria tsy mbola afo mirehitra no nentina teny fa sary namboarina) fanamarihana ny fahatongavan’ny hosona Lion eto Madagasikara, an’ny orinasa Orange, mba hampitombo ny hafainganam-pandehan’ny aterineto sy ho fampihenana ny vidin’ny tolotra Orange, ka nandalo tanàna maro teny amin’ny làlana nolalovany ary noraisin’ingahy Minisitry miandraikitra ny Teknolojia sy ny solontenan’ny PDS Antananarivo Renivohitra teo anoloan’ny Lisea Teknika Ampasampito
dia noraisina teny amin’ny kianjan’Alarobia kosa ny Sabotsy antoandro tamin’ny 11 ora sy 12 minitra. Tafiditra ao amin’ilay resaka ‘haingam-pandeha’ na ‘Haut débit’ tanteraka amin’izay izany izao ny Orange raha mijanona kosa ho resa-be izany ho an’ireo mpanao tolotra hafa hatramin’ny androany.
Ny tany hono anefa tsy ilaozan’adala, ka rehefa tonga teny ny vahoaka maro, nitondra ny tapakila fidirana maimaim-poana sy naka ny satroka + akanjo bà, dia nahagaga ahy ny fihetsiky ny mpitandro filaminana vitsivitsy niandry ny vavahady.
Nisy ramatoa iray niaraka tamin-janany vavy, nipetraka tsy lavitra ny vavahady fidirana (ao anaty kianja io an!).
Ireo atleta nitondra ny afo niditra ny kianja
Samy miandry ny fahatongavan’ilay sarin’afo daholo (izay novàna ho tena afo amin’izay nony niditra ny kianjan’Alarobia).
Naharay antso tampoka anefa izy mianaka ireto fa misy marary tampoka ny zanak’ilay ramatoa any an-tanàna any. Handeha hivoaka izy, tsy nanampo na inona na inona. Tonga dia tositosika avy amin’ny mpitandro filaminana no nahazo azy. Hoy indrindra ny teny navoakan’ireo niandry vavahady:
Tsy misy mahazo mivoaka eto raha tsy amin’ny 12 ora sy sasany
Ny andro anefa amin’io mbola amin’ny 10 ora sy sasany. Niezaka ny nanazava mora ihany ilay ramatoa sy ny zananyhoe raha asaina mifidy amin’ny fety sy ny fahasalaman’ny ankohonana, dia aleo ny fety no tsy hita. Toa tsy aina tokoa ny aina rehefa tsy ny an’ny tena no voatohintohina raha ity tranga ity no raisina.
Tositosika no nahazo azy mianaka, ary dia nanomboka niakatra koa ny feo.
Fomba avy aiza, toetra manao ahoana itony asehon’ny mpitandro filaminana itony e? (Teny avy amiko io fa tsy an-dry zareo an!) Sombiny avy amin’ny gidragidra sendra voatahiriko an-tsary ity aseho anareo ity.
Soa ihany aho fa tsy nitetateta nanao ity karazan’asa lasa zary mahamenatra ity, rey olona. Tsy nisy fanajàna ny maha-renim-pianakaviana , na ny maha efa nahazo taona ilay ramatoa, fa dia naronjondronjona sy natositosika hidina sy hiverina tao anaty kianja izy mianaka vehivavy ireo.
Na teo aza anefa izay zavatra niranga izay, dia nifaly sy nitsinjaka ihany ny hafa, satria izay rahateo no anton-dia tany, ankoatry ny hoe mba hahazo ilay satroka sy akanjo tsy vidiam-bola, sitrany ahay.
Nony tonga teny an-tsofin’ireo mpikarakara ny zava-niseho tenyam-bavahady,dia niantsoantso tamin’ny fanamafisam-peo ry zareo ho an’ireo mpiandry vavahady, fa hoe :
Hoe anareo miandry ny vavahady, aleo hivoaka ny olona izay te-hivoaka, fa izay mivoaka kosa dia tsy mahazo miverina intsony
Amin’ny fomba ahoana moa no hifantenana an’izay? Sarotra tanterahana famora tenenina, satria vavahady tokana no natao hidirana sy hivoahan’ny rehetra, ary ilay izy rahateo fidirana tsy nisy fisavana teo ambony farehefa tonga tany ambany tohatra (anaty kianja) izahay nahita sady fisavana no fizarana kojakoja sy EauVive. Ny talohan’izay no tsy fantatro
Filed under: fiaraha-monina, haitao, tapatapany, Zavakanto | Tagged: Alarobia, Haut débit, Lion, Madagascar, Madagasikara, Orange |
« MANJAKAMIADANA: 14 taona lasa Anafaro fianakaviana ny toy itony »